Mohamed Salah oo lagu la taliyay inuu iska xiiro GARKA si uusan ugu ekaan Argagixisada – Gool FM
Mohamed Salah oo lagu la taliyay inuu iska xiiro GARKA si uusan ugu ekaan Argagixisada
Liibaan Fantastic March 13, 2018
(Liverpool) 13 Maarso 2018 Weerar yahanka kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa lagu la taliyay inuu iska xiiro garka iyo waliba tintiisa badan taas oo looga shakin karo inuu yahay Argagixiso.
Wariye ay isku dalyihiin Mohamed Salah oo lagu magacaabo Salaax Muntasir ayaa maqaal aad loola yaabay ku qoray wargayska Al-Ahram.
Salaax Muntasir ayaa u sheegay Mohamed Salah inuu yahay shaqsi ay fiirsanayaan shacabka reer Masar isla markaana looga baahan yahay inuu iska hagaajiyo muuqaalkiisa oo uu iska xiiro garka iyo timaha badan ee uu siidaystay si aan loogu malayn Argagixiso.
“Mohamed Salah ma ahan kaliya laacib kubadd cag laakiin wuxuu noqday xiddig malaayiin qof ay raadinayso akhbaartiisa, marka aad xiddig nuucaas oo kale aad tahay waa inaad ilaalisaa xirfadaada iyo muuqaalkaaga, wuxuuna u baahan yahay inuu badalo qaabkiisa” ayuu Salaax Muntasir ku yiri maqaalkiisa oo u badan talo uu u jeedinayay weerar yahanka Liverpool iyo xulka Masar.
“Marka hore waa inuu iska xiiraa garkiisa badan kaas oo ah mid aan ku haboonayn xiddignimadiisa iyo da’diisa intaba, waxaana suurogal ah inay xitaa dhaliso shaki ah in la la meel dhigo Argagixisada aan wax kala hubsan”.
“Intaas waxaa sii dheer inuu fiiro gaar ah u yeesho tintiisa tirada badan taas oo ah mid isku dhex jirta, waxaadba moodaa in muddo sanado ah aan tinta loo jarin”.
Salaax ayaa u sheegay weerar yahanka Liverpool inuu isbadal ku sameeyo muuqaal kiisa gaar ahaan koobka adduunka.
GOOGOOSKA: Manchester United vs Sevilla 1-2 (Man Utd oo ku baxday midigta Sevilla)